Khariidadaha Google ee Khariidadda Moobaylka 6 - Geofumadas
Khariidadaha Google oo ka socda mashiinka Mobile 6
Abriil, 2010 Google Earth / Maps, GPS / Qalabka, topografia
Iyo in aad u maleyneyso in farsameyaal ay ku socdeen qalabkaas ku dhawaad ​​hal sano, si aan u dhammeeyo in ay ii sheegaan inaanay fahmin isaga iyo in ay jecel yihiin inay ilaaliyaan Pro. Hagaag, aan raadino dariiq aan ku adeegsano dhowr GPS Mobile Mapper 6, oo aan rajeynayo inaan dhigo si aan ula shaqeeyo saldhigga Promark 3 iyo dib-u-habeynta kadib ee Xafiiska Mapper Mobile.
Iyadoo aan la shaqeynin ka dib, kumbuyuutarkani waa sida biraawsar kasta. Iyadoo la shaqeynayo kadib way ku guuleysanaysaa a Juno SC oo ka socda Trimble.
Si aan u deyno, aan isku dayno inay isku xiraan Khariidadaha Google, iyaga oo isticmaalaya akhriska Jonathan Draffan laga soo bilaabo Abriil sanadkii hore.
Ku xir internetka
MobileMapper 6 wuxuu saddaxda siyaabood u adeegsanayaa internetka:
Bluetooth, taas oo ah midka ugu waxtarka leh ee la samayn karo iyada oo la marayo moobilka moobiilka ama inta ay wali wali soo wacaan, taleefanka gacanta.
Waxay kuxirantahay USB kumbuyuutar kumbuyuutar leh marin internet, adoo adeegsanaya Activesync. Tani waxay noqon kartaa Netbook, mid ka mid ah 300 oo doollar, iyo nooca Alcatel ee USB, oo ah adeeg ay hadda bixiyaan inta badan shirkadaha taleefannada.
Waxaan u maleynayaa inaad leedahay mid kale oo leh xiriir VPN laakiin wax fikrad ah kama haysto sida ay u shaqeyso. Nasiib darro in carruurtani aysan ku jirin nooc kale oo xiriir ah oo wireless ah, sida kan loo isticmaali karo modem wireless ah.
Kaararka Khariidadaha Google
Tani, waa inaad tagtaa ilaha Google ee loogu talagalay mobile, bogga http://m.google.com. Nidaamku wuxuu si otomaatig ah u aqoonsan yahay inaad ka xirmayso Windows mobile, iyo ikhtiyaarka lagu soo dejisan karo ayaa u muuqda.
Waxay ku weydiineysaa dhowr jeer inay oggolaadaan soo dejinta iyo rakibidda, laakiin in ka yar daqiiqad ayaa lagu rakibay. Waa suurtagal in la dhaqaajiyo ama la joojiyo lakabyada sida:
Tan awgeed, waa in laga sameeyaa oo keliya menu-ka: Fursadaha> dhaqaaji GPS.
Si aad u qaabeyso, waxaa lagu sameeyaa Xulashada> Isukeel GPS. Waad ka tagi kartaa Maamulaha Windows miiran, laakiin waxaad yeelan kartaa natiijooyin fiican haddii deked gaar ah la shaqeysiiyo.
Waxaan isticmaali doonaa COM1 iyo 9600.
La yaab leh, badhanka buluugga ah ee geeska, guji oo wuxuu kugu qaadanayaa midig booska aad joogto, iyadoo shaag hufan oo khalad sax ah suurtagal ah oo hoos u dhacaya markii dayax gacmeedyo badan la arko. Marka ugu horeysa waxay kudhawaataa xafiiskeyga, iyada oo dayax gacmeedyada ay kaheleyso daah furnaanta daaqada laakiin inyar oo aad heysato waxaad arki kartaa sida ay ku bilaabato wareejinta isku dayga ah in la siiyo boos fiican, oo udhaxeysa ilaa 20 mitir.
Tirada dayax gacmeedyada aad daawaneysid waxaa laga muujiyey midigta kore. Aad wax ku ool u ah inaad raacdo gaariga, waan arki doonaa waxa dhaca marka dib loo farsameeyo xogta la qabtay.
Post Previous" Hore Soo deji xogta guud ee xarunta
Post Next Waa maxay PlexEarth 2.0Next »
56 Jawaabaha "Khariidadaha Google ee Khariidadda Moobaylka 6"
Maya. 6 Mobilemapper uma adeegi karo saldhig.
Venustiano Martinez Lucas isagu wuxuu leeyahay:
Hada, haddii aan lahaa laba gps mobileemapper6, miyaan u isticmaali karaa mid ahaan saldhiga iyo mid kale si aan u qaato xogta?
LUIS JEED isagu wuxuu leeyahay:
kaas oo ah GPS-ga caawiyay, wuxuu leeyahay isla saxan sida khariidadda moobiilka 6. Waad ku mahadsan tahay
Agoosto, 2011 at
Iyadoo loo yaqaan 'Ashtech or Topcom distributor' ee dalkaaga.
beer garcia isagu wuxuu leeyahay:
Ma ii sheegi kartaa meesha ay i siin kartaa code ee activacionn phone 6 mapper a lumay oo waxaan haystaa code ka, mahad
Ma caddayn haddii aad haysato tiirar gooni ah, sidaas darteed waa inaad aragto haddii ay lagama maarmaan noqoto in la dhameeyo.
Maskax ahaan, waa inaad la qabsataa qaabka jajab tobanlaha ah, si AutoCAD aysan u khaldamin kumanaanka kumbuyuutarka. Waxaad taas ku beddeli kartaa qaybta gobolka ee qaybta kantaroolka Windows.
Janeth isagu wuxuu leeyahay:
Anigu waxaan leeyahay iskudhafyadaas si fiican, waxaanan u baahanahay inaan u gudbiyo AUTOCAD sida polyvin oo aanan garanaynin sida loo sameeyo qof ku caawiya ii caawi
COORD X MAGNA COORD IYO MAGNA
Ma aqaano buugga gacanta ee aad aragtay, Tani waa kan aan ogahay.
Amarka habka loo soo koobay es:
-In la barbar dhigo barnaamijka khariidadda moobiilka
-Ku dar goobaha xaafaddaada
-Ku dar feylka .map oo ku jiri doona layers
-Ku dar dhejisyada shp oo aad ku keydsanaysid xogta (sirqaha, jidadka, calaamadaha, iwm.)
-Warbixinta xogta lakabka xiisaha.
Khariidadda guur-guura waa barnaamijka keena moobiilka 'Mobile Mapper', wuxuu abuuri karaa .map iyo .shp faylal, maahan howlo badan oo aan ka ahayn qabashada xogta. Haddii aad rabto inaad akhrido waxyaabo kale oo ka mid ah macluumaadka la qabtay waa inaad kala soo baxdaa lakabyada shp oo aad ku falanqaysaa barnaamijka CAD ama GIS.
Fursad kale ayaa ah inaad isticmaasho barnaamij kale oo mushahar leh sida ArcPad ama Cartopad kuwaas oo laga yaabo inay yeeshaan sifooyin badan.
Waxaad kordhineysaa saxnimadeeda ka dib qaabaynta xogta ku saleysan saldhig kale, waxaad ku jirtaa barnaamijka Xafiiska Macaamiisha Mobile, marka la rakibo dhibcaha way hooseeyaan waana uu masuul ka yahay raadinta xarumaha ku dhow xitaa haddii kombuyuutarku ku xiran yahay internetka.
Taasi waxay ka dhigeysaa in xogta kor loo qaaday ay saxan tahay.
alberto rguez isagu wuxuu leeyahay:
maalin aad u wanaagsan mudane geo .. waxaan rabaa in aan ogaado habka loo sameeyo sahaminta topo .. khariidadeye 6 buuga kaliya ayaa keena waxyaabaha aasaasiga ah laakiin ma aanan awoodin in aan helo hawlgalka saxda ah ee ah, calaamadee qodobbada, aqri azimuth-kooda, iskuduwayaashooda, isku duubni ... oo laga yaabee inaan awoodi doono inaan ku sameeyo koox qura anigoon haysan salka midna ... Waan ku faraxsanahay dareenkaaga horay ... tabasco mexico
Eduard isagu wuxuu leeyahay:
Hello, waxaan haystaa 2 khariidadda 6, laakiin waan ogahay inay haystaan ​​qalad qadar ah, sidee baan u kordhi karaa saxsanaanta? Ma u baahanahay barnaamij dheeraad ah?
Xusuusnow in dhibicda laga helay garoonka ay leedahay qalad iyada oo aan la qorin ku dhawaad ​​mitir 2.50. Mar haddii la soo diro ka dib waxaad yeelan doontaa qalad ku saabsan mitirka 1.00.
Hel fikradda, in qodobkaaga koowaad uu yahay meel kasta oo ku jirta goob wareeg ah oo mitir 5 dhexroor ah. Midka labaad ee wareegga mitir 2 dhexroor.
Markaad mar kale tagto barta, dhibcahaagu waxay noqon doonaan meel kasta oo isku wareeg ah.
hernadez lafa-qabati isagu wuxuu leeyahay:
fiiri aniga waxaan haystaa mareegtada mobaylada ah ee '6' xitaa iyada oo aan jirin prosprocess su'aashaydu waxay tahay haddii marka aan dhibco ka helo dhul ballaaran isla markaana maalmo kadib aan dib ugu laabto isla dhul isku mid ah ayaan yeelan doonaa dhibco isku mid ah? Oo maxaa sax ah oo aad ka heli lahayd boostada gadaal ka soo baxa? iyo haddaan dhibco ku helo boostada oo aan dib ugu laabto garoonka ma heli lahaa dhibco la mid ah? Haddii aad ii jawaabi karto, aad ayaan ugu mahadnaqayaa
Maaha arrin xaddidan, laakiin waa adeegsiga iyo nooca xogta la xidhiidha.
Tusaale ahaan, waxaad heli kartaa lakabka ah ee Baakadaha, tani waxay noqon doontaa nooca geesoolayaasha, laakiin haddii aad rabto in aad iska diiwaan sidoo kale ganacsiga uu noqon doono lakabka kale oo ay dhacdo in tani waxay noqon doontaa mid ah dhibcood, haddii aad rabto in aad iska diiwaan jidadka tareenka musqusha aad ocuparás linestring ah lakabka nooca cusub.
Taasi macnaheedu waa in lakabyo kala duwan.
Si loo abuuro khariidado asalka ah waa inaad isticmaashaa Xafiiska Khariidadda Mobile Mobile:
qalab> khariidadaha taariikhda
Halkan waxaad ku dari doontaa vektorka ama lakabyada raajada ah ee aad filayso khariidada asalka ah ee aad haysato, marka aad diyaar u tahay inaad u gudbiso gps-gu isticmaalka
feyl> guluub gps> khariidada asalka
sanadka isagu wuxuu leeyahay:
Hello, waxaan doonayay in aan ogaado waxa xaddeynaya lakabka haddii juqraafi juquraafi ah ama tirada hay'adaha aan qori karo lakabka kasta. ama si kale loo yiraahdo marka aan isticmaalayo lakabka kale, mararka qaarkood gpskaygu wuxuu iigu sheegi doonaa inaanan diiwaangelin karin hannaanka lakabka; Shaki iigama qabo, buuguna si cad uma caddaynayo, waxa kaliya oo aan dhihi karaa waxaan abuuri karaa lakabyo cusub waxaanan doonayaa inaan arko meesha aan ka heli karo khariidad taariikheed.
Ma ka hadashaa khariidada xadka caalamiga ah ee Costa Rica?
Maxaad u gaabisay?
Pips01 isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ku leeyahay Magellan gudaha Costa Rica, waxaan horey ugu guuleystey "unmove" khariiradda waddanka Garmin; Hadda waxaan ubaahanahay inaan ku dul fujiyo khariidad asal ah anigoo adeegsanaya barnaamijka 'Mobile Mapper 3.4' ama software 2.7; laakiin waxaan ku waalanahay isku day aan ku raadinayo khadka internetka. Ma ogi halka aan ka heli karo.
Waa in la soo bandhigaa. Isku day inaad bedesho qaabka dhibcaha, maxaa yeelay AutoCAD qaabka ugu dambeeya ayaa ah dhibco dhibicyo ah oo aan muuqan.
version hore si mapper mobile iibsan oficce 6 hello iyo haddii aad xaq u tahay inaad leedahay qalab ay u dhoofiyaan SHP si DXF files. Anigu waxaan isticmaalaa qalab waxaanan abuuraa dxf laakiin marka aan rabo in aan ku sawirno cad cad oon arki karin. sababtoo ah lama soo bandhigi doono iyada oo lagu soo bandhigayo khariidadda moobiilka. Waxaan abuuray faylka markaan isticmaalayo qalabka, laakiin markaan isticmaalayo cad baabuurka ma arki karo.
mahadsanid caddayn waxaan u maleynayaa inay aad u cadahay, aad ayaad u mahadsantihiin
Waxaan arkaa jahwareerka. Wixii aad ku cabbirto adigoo adeegsanaya qalabka loo yaqaan 'snap tool' had iyo jeer waxay noqon doonaan kuwo sax ah, nasiibdarro in Google Earth uusan lahayn isla markaasna tallaabooyinka aad sameyneysaa ay u dhowdahay waxa ishaadu aragto isla markaana jiirkaagu gaari karo, waxay sidoo kale saameyn ku leedahay habka aad u socoto. Midkoodna ma Xafiiska Mapper Office 6 aad ayuu ugu fiican yahay tan.
Google Earth waa in lagu sawiro xogta, xafiiska moobiillada moobiilku waa inuu muujiyo isla markaana uu adeegsadaa xogta kaydka. Laakiin waxkasta oo aad cabbirto ma jiraan oo waa sax maadaama barnaamijyadanu yihiin kuwa sidaas.
Si aad u sameyso tafatirka, cabbiraadda, cinwaanka iyo shaxda masaafada, iwm, waa inaad isticmaashaa Microstation, AutoCAD ama gvSIG, oo leh xulasho topoloji ah oo loo yaqaan 'snap'. Waxaan damaanad qaadayaa in cabirku uusan la mid noqon doonin waxa Google Earth iyo Mobile Mapper Office ay ku siinayaan, laakiin waxay noqon doontaa cabirka saxda ah (cabirka, ee ma ahan xaqiiqda duurka).
Waa inaan sidoo kale caddeeyo, in Ma aha isku mid barnaamijka "Mobile Mapper 6 Office" oo la imanaya aaladaha cusub ee 'MM6' marka loo eego “Mobile Mapper Office” oo hore loogu iibin jiray aaladihi ka horreeyay. Kii hore wuxuu lahaan jiray awood uu ku dhoofiyo dxf sidaa darteed waad ku shaqeyn kartaa feylasha barnaamijka CAD.
Waa hagaag haddii runtu ay tahay inaanan cadayn, su'aasheyda ayaa ah boqolaal afartan dhibcood oo leh gps mobile mobile. kuwani waxay tilmaamayaan gundhigga dhulka google iyo waxaan arki karnaa fogaanshaha u dhexeeya dhibic iyo farriinta qalabka google ee u ogolaanaya in uu taas sameeyo. Markaas ayaan ka heli karto mapper 6 mobile ofice xafiiska in sidoo kale kuu ogolaanayaa ii furo dhibcood Medi iyo kala fogee dhibcood. oo waxaa soo baxday ayaan masaafo xafiiska GPS kala duwan ee hal ama laba mitir for cabbirka kasta ee la xiriirta tallaabooyinka barnaamijka eart google. Su'aashaydu waa tan ka mid ah cabbiraadyadani waa kuwo lagu kalsoonaan karo. Ma qiyaasi kartaa in qaadan karaan waa kuwan dhibcood AutoCAD iyo marka lagu qiyaaso kala fogee dhibcood waan ogaa tallaabooyin kale. kaas oo noqon lahaa kuwa ugu kalsoon in dhammaan.
Ka jawaabidda su'aalaha kala duwan:
>> Waxay kuxirantahay isha sawirada, inbadan oo kamid ah Yurub iyo Mareykanka waa kuwo aad u saxsan laakiin wadamada Hisbaanik waxay leeyihiin barokac ilaa mitir 30. Moobil moobiil ah oo aan lahayn boostada ayaa la siiyaa saxsanaanta mitirka 2.50, iyo iyada oo boostada la dhigto meel u dhow dhulka hoostiisa.
>> Ma fahmo su'aashaada kale. Mobile Mobile Office waa software ah oo aad isticmaasho si aad u sameyso dib u dhiska, ma aha koox.
>> Waxaad ku dhejin kartaa Mashiinka Mobile ee barnaamij kasta oo ku shaqeeya Windows Mobile, sida ArcPad, Excel, Word, PowerPoint, iwm.
>> Barnaamijka "Mobile Mapper" (barnaamijka) wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dhoofiso xogta dxf, waxaadna ku arki kartaa AutoCAD.
qadarkaas waa mid sax ah oo la sameeyey google-ga ama mid ka mid ah la sameeyey khariidado mobile-ka ah
hello maxaa yeelay anigu ma calaamadin karo waddooyinka leh qodobada aan ka soo iibsado gps si ay u xajistaan ​​xafiiska khariidada moobiilka laakiin kaliya dhibicda aan ka koobanyahay tan
Waxaan ka dhoofi karaa dhibcooyinka xafiiska khariidadaha mobile-ka ah si aan autocad u soo dejiyo
hello in barnaamijyada kale ee aan ku rakibi karo khariidadeyda gps mobile
khariidadaha google-yada ee khariidadda moobiilka 6 waxaa loo isticmaali karaa waddan kasta.
Hello laga yaabaa waydiinta HADDII PERZONAS KASTA MARKAAN MM6 ILA SOO DIRI KARA OFICCE THE MAPPER guurguura ku AAN MAIL WAA ii SALIO WAXYEELAAN CD IYO DIIWAANKA AAN QAAR KA MID AH georeferencing A of line gudbinta a IN qalabka LAAKIIN UUNA waxaan ku arki kartaa wax dibadda XAFIISKA.
Hello mahad siiyo COREEO Daanyeel IYO kuu soo diri Buugga user ee PDF
hello daniel waa mid sahlan haddii aad i siiso emailkaaga waxaan kuu soo diray macluumaad si aad u sheegi karto wax yar
Daniel isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan soo iibsaday MM6. Anigu ma aan awoodin in aan qalabeeyo, miyaan isku dayey inaan ka badiyo waqtiyada 20, talooyin kasta?
Anigu weli ma fahmin sida loo isticmaalo qalabka. Waxaan u soo iibsadey si aan u qaado dhibcooyinka, cagajugleyn iyo jidad. Ma cidna ma ogtahay ama ma iga caawin kartaa macalin wanaagsan?
hello baan ku ahaa wax aan macquul aheyn in ay soo bixi xafiiska 6 mapper mobile of jihada waxay i haddii qof uu leeyahay nooc halis ah oo ku filan in ay ila wadaagaan my email waa grateful'll joogo raulartola1@gmail.com
Febraayo, 2011 at
Ma jebin, waxa dhacaya waa in url dhisto si xun loo dhisay.
Softiweerku waa ka duwan yahay, waan fahmay. Waad ka soo dejisan kartaa internetka, laakiin koodhka ka hortagga tallaalka waa in la iibsadaa.
hi waxaan rabaa in aan sidoo kale in la ogaado haddii iibka waxaa ka mid ah xafiiska mapper GPS monile 6 maxaa yeelay halkaan ayaan ku iibsan ee Honduras iyo waxaa soo baxday dukaanka iibinayay hadda ii doonayo inuu iibiyo xafiiska ii gooni doolarka 100
hello iskuxirku wuxuu u muuqdaa mid hoos u dhacaya ama ma jiro, laakiin mahad u celinta qaar ka mid ah cinwaanka kale ee laga yaabo inay noqoto.
Sure, waxaad ka soo dejisan kartaa bogga Ashtech
The Mobile Mapper 6 loogu xidhi karaa Khariidadaha Google isticmaalaya codsiga Google ka dhigay inay maraan ka mobile ah, laakiin Office Uruurinta Mobile ah, si aan u ogaado ma maamuli kartaa layers KML ama eekaan Google Earth.
Hi Waxaan leeyahay GPS 6 ah khariidaynta mobile laakiin iibka i kuma jiraan disk ofice mapper mobile aan su'aasha waa in aad kala soo bixi kartaa lacag la'aan ah ka internetka ama u leeyihiin in ay soo iibsato iyo su'aal kale waa hadii aan isticmaali kartaa 6 xafiiska khariidaynta mobile iyo google eart si ay u abuuraan maps.
Eloy Romo Luján isagu wuxuu leeyahay:
Waa suurtagal in la soo dejiyo xogta la soo ururiyay 6 Mobil Mobiler si toos ah PC-ga oo aan lahayn barnaamij khaas ah.
Salaan iyo mahad.
Aad bay u fiican tahay in qofku xalliyo shaki-kaaga.
Waa inaad si tartiib tartiib ah u sameysaa, dusha sare, adoo adeegsanaya qalabkaaga marka aad codsato.
Oktoobar, 2010 at
Waad salaaman tahay qof ayaa i caawin kara Aniga ma dhaqaajin karo GPS-ka taleefanka gacankayga oo waxaan rabaa in aan xakameeyo kombuyuutarka oo ii soo dir farriintan "iscasilaadda xariiqda taagan ayaa ku guuldareysatay fadlan isku day mar kale" Waxaan u baahanahay caawimaad
Paco isagu wuxuu leeyahay:
Waad salaaman tahay, qof ma ii sheegi karaa sida loo xalliyo dhibaatada ku jirta feylka qaabka loogu shubo mobilemaper 6 ,, wuxuu u dhigmaa saadaasha feylka .map iyo qaabka, laakiin wali wey i sii muujineysaa qalad ah in saadaashu aysan iswareejinin, waxaan u isticmaalaa utm 15n datum wgs84 ...
Guillermo isagu wuxuu leeyahay:
hello galab wanaagsan, kaliya iibsaday MM6 ah iyo anigu ma heli karo my laptop in ay ku xidhmaan, oo ka dhigay geedi socodka sida ay ka dhigan Waano ku rakiban ee khariidaynta mobile iyo waxba, baaritaan iyo uninstalling ka mobile khariidaynta, qeybtii labaad iyo waxba, u cusbooneysiin ActiveSync oo waxba ma qof i caawin kartaa, porfavooorrrrr ii uuuurgeeeeeee, my email waa century21mx @ hotmail, ay taageeri agradecere
Ha isku qasin naftaada, isticmaal barnaamijka GIS. Waxaa jira wax badan oo dhaqso iyo gadaal ah waa inaad la kulanto.
Fidencio Garcia isagu wuxuu leeyahay:
Qaybta aan haysto waa 1.0.1.1
oo ma heli karo meesha aad ku dhoofi lahayd dxf
Sidoo kale sida aan u arko, software-kani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dhoofiso dxf, inkasta oo aad sameysid tan waxaad lumin doontaa xogta la xidhiidha shp, kuwaas oo lagu kaydiyo dbf.
Xogta in Mashiinka Mobile Mobile, uu ku yaal qaabka shp, waxaad ku shaqeyn kartaa barnaamij kasta oo CAD / GIS ah: AutoCAD, ArcView, Microstation, gvSIG, iwm.
Mobile Mapper ma aha barnaamij GIS ah, waa barnaamij dib loogu dhigo xogta GPS, si sax ah loo siiyo.
Ayjuesu !! taasi waa halis
maxaa yeelay markaa waxaa loo qaadanayaa in markaan qoro dhibic «oo xilligaas aan joogo meesha aan haysto iskuduwayaasha shaashadda» laakiin
Haddii aanan ku qorin buugga liiska, miyaanan arkeynin mar kale ilaa aan ka shaqeeyo?
Iyo wax kale oo dheeraad ah, oo ku jira xafiiska khariidad guurguura waxaan arkayaa xogta goobaha shaashadda, laakiin sidee baan u dhoofiyaa ama u dhejiyaa CAD?
Ama ma waxaan isticmaali karaa barnaamij dheeraad ah si loogu badalo shp to dxf?
Waad mahadsan tahay!
Uma maleynayo sidaas, waxaad ku jirtaa xafiiska khariidadda mobile ama barnaamij kale oo gis ah oo aad arki karto nooca faylka .shp
Waad ku mahadsantihiin inaad wax badan ka jawaabtay!
laakiin su'aasha aniga igu dhacda inta badan ...
haddii aan ku jiro berrinka oo kiciya qaar ka mid ah geesoole
iyo marka aan helo xarun internetka ah waxaan doonayaa inaan arko isuduwaha
ee geesaha kiciyey, ma si toos ah ugu sameeyn karaa GPS?
Iyadoo aan u baahnayn barnaamijyo dheeraad ah?
Markaad xogtaada ku soo qaadatay moobaylkaaga Mobile waxaa lagama maarmaan ahayd in aad abuurto mashruuc kudhexaad ah .map, iyo sidoo kale lakabyo dheeri ah .shp. Post this Waxaa si faahfaahsan loogu sharaxay.
Si aad u soo dejiso xogtaas, waxaad u baahan tahay inaad kaarka SD ka saarto GPS-ka, oo aad ku dhejiso PC-gaaga, ka dibna soo degso faylashaas. Sidoo kale dhex mara USB iyada oo la adeegsanayo ActiveSync.
Si aad u aragto xogta, waxaad isticmaashaa software-ka Moodhadhka Mobile Mobile, kaas oo la yimaada iibka GPS-ga, haddii aad u socoto geedi socodka, taas ayaa lagu sharaxay boostadan.
Haddii aad rabto inaad ku buuxiso AutoCAD, waa inaad bedeshaa faylasha qaabka dxf, taas oo lagu sameyn karo barnaamijyo badan.
Ma iga caawin kartaa inaad ogaato sida aan u arki karo macluumaadka isuduwaha
ee dhibcaha aad qaadato GPS Mobile Mapper 6
Waxaan u baahanahay inaan macluumaadkan ku soo qaato autocad.
Mobile Mapper 6, iyada oo aan boostada la dhigin waa sida biraawsar kasta. Xogtu waa inta u dhaxaysa mitir radial 3 iyo 5.
Waxaa ugu fiican inay iibsadaan iyaga oo isugu jira, sida Promark3 iyo hal ama ka badan Mobile Mapper 6.
Promark u isticmaal sida saldhigga, oo tan kalena waxay ku qaadataa xogta, iyo ugu dambeyntii, postprocesas isticmaalayo Mobile Office Mapper, iyadoo la isticmaalayo sida tixraaca waxa qaaday Promark markii uu joogay ma guurto ah, iyo siin precisions ka yar hal mitir.
By habka, dalka aad tahay?
Maryan Virgin isagu wuxuu leeyahay:
megustaria dheeraad ah oo ku saabsan 6 Maper sida waxaa loogu tala galay in ay soo iibsato qaar ka mid ah ee xafiiska, shaqo ee catatsro mar dambe waayo, haatan Salaan